UN: Dowladda iyo mucaaradka dhibka ay geysteen - BBC Somali
UN: Dowladda iyo mucaaradka dhibka ay geysteen
Warbixin ay soo saartay Qaramadda Midowbay ayaa ku eedeysay dhamaan dhinacyada colaadda Suuriya in silic aanan laga hadli karin ku kalifeen dadka rayidka ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in uu jira weeraro aan kala sooc lahayn oo lala beegsado magaalooyinka ku yaala siiriya oo dhan, halkaas oo dadka rayidka ah si ula kac ah bartilaameed ay ugu dhitaan ciidamada dowladda iyo mucaaradkuba.
Warbixintu ayaa muujineysa in ciidamada Suuriya ay magaaladda Xalab maalin kasta oo sanadkan ka mid ah ay ku duqeynayeen baraamiil bombooyin ah. Waxayna ciidamada ku gool dareysteen in ay istimaalaan hub si qumaati ah wax loogu beegsan karin.
Baarayaasha Qaramadda Midowbay ayaa waxay sheegayaan in dagaalka noocaan ah uu u dhigan yahay dabmiyo dagaal.
Waxay sidoo kale soo jeediyeen liis dheer oo ay qoran yihiin dadka looga shaki qabo in ay dhibkaan ay geysteen. Xukuumadda Suuriya ayaa ku seertay warbixintan qaramadda Midowbe.